१०. स्लिम परिवार
उनले यति सम्पत्ति आफ्नो कार्सो ग्रुपबाट कमाएका हुन् । कार्सो ग्रुपको स्वामित्वमा मेक्सिकन स्टक एक्सचेन्जमा सुचीकृत करिव ४० प्रतिशत कम्पनीका सेयर छन् ।
उनको सम्पत्तिले मेक्सिकोको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ७ प्रतिशत बराबरको योगदान दिन्छ । उनी न्युयोर्क टाइम्सको सबैभन्दा ठूलो सेयर धनी हुन् । राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पले न्युयोर्क टाइम्समा आफ्नो सेक्स स्क्यान्डलको बारेमा प्रकाशित लेख क्लिन्टनलाई सहयोग गर्नको लागि छापिएको आरोप लगाएका थिए ।
९. डु पोन्ट परिवार
डु पोन्टहरुको करिव ३५ सय परिवारको फैलिएको नेटवर्क छ जसको करिव १४ अर्ब डलर बराबरको सम्पत्ति रहेको छ । उनीहरु सयौं वर्षदेखि अमेरिकाको सबैभन्दा धनीमध्यका एक परिवार हुन् ।
डु पोन्ट फ्रान्सेली क्रान्तिको समयमा भागेका थिए र अमेरिकामा गन पाउडर उत्पादन गर्ने कम्पनी खोले । कालान्तरमा उनीहरु अरु केमिकल र विष्फोटक पदार्थको व्यावसायमा पनि लागे । उनीहरुले केभ्लर,नाइलन र टेफ्लोन को आविष्कार गरेका इन्जिनियरहरुलाई पनि जागिर दिए ।
अहिले उनीहरु धेरैको सङ्ख्यामा छन् । सिधै व्यापारहरु नियन्त्रण गर्दैनन् बरु सेयरको मुख्य अंश उनीहरुको स्वामित्वमा रहेको छ । पेटे डु पोन्ट चौंथोले ह्वाइट हाउसकै नियन्त्रण हासिल गर्न खोजेका थिए । उनी डेलावेरका गर्भनर थिए । सन् १९८८ को राष्ट्रपतिय निर्वाचनको लागि रिपब्लिकनको तर्फबाट उम्मेवार भएका थिए ।
यसै परिवारका रोबर्ट रिचार्डले आफ्नै तीन वर्षकी छोरीलाई बलात्कार गरेको स्विकार गरेका थिए तर उनले आफ्नो पैसा र प्रभावको कारणले जेल बस्न परेन ।
८. फेरेरो परिवार
सन् २०२३ को भ्यालेन्टाइन डेको दिनमा माइकल फेरेरो मोन्टे कार्लोमा निधन भएको थियो । उनले एक इटालियन चकलेट साम्राज्यको साथमा २३ अर्ब डलर बराबरको सम्पत्ति छोडेर गएका थिए ।
फेरेरो रोचर किन्डर, टिक ट्याक र नुटेला जस्ता लोकप्रिय ब्रान्डहरुको को स्वामित्व परिवारको रहेको छ । माइकल यो परिवारका तेस्रो सदस्य थिए जसले आफ्नो छोराहरुलाई सीइओ बनाएका थिए । उनी युरोपको सबैभन्दा धनी र गोप्य टाइकुनको रुपमामात्रै होइन आफ्नो प्रभावको कारणले पनि परिचित थिए ।
सन् २०१२ मा उनको परिवार लाई करोडौं रुपैंया कटुसको नक्कली भुक्तानीको रुपमा बाहिर लगेको आरोप लागेको थियो । फेरेरो सालुटो ब्रुनो नामको ऐतिहासिक क्लबको हिस्सा रहेको र जसले ब्याक रुम डिलिङको लागि उद्योगलाई सहयोग गर्ने गथ्र्यो ।
जर्ज बुशका सिनियरका पिता र जर्ज डब्लु बुशका हजुरबुबा प्रिस्कट बुशलाई व्यापक षडयन्त्रको आरोप लागेको थियो । उनको नातेदारहरुको साथमा प्रिस्कट खप्पर र हड्डीको कुख्यात कारोबारी थिए ।
सन् १९३३ मा उनले एक सैनिक ‘कु’ गरे जसको बलमा उनले राष्ट्रपति रुज बेल्टलाई हटाएर हिटलर र मुसोलिनीले जस्तो शासन गर्न खोजे । दोस्रो विश्वयुद्धमा नाजी संगठनहरुसँग कारोवार गरेर बुशको परिवारले धेरै धनजम्मा गरेको थियो ।
६. एस्टर परिवार
अमेरिकाको पहिलो मिलिनेयर एस्टर परिवारका सदस्यहरु कसैले होटल बनाउन स्ुरु गरे, कोही ब्रिटिश राजनीतिज्ञ बने र कसैको टाइटानिक जहाजमा मृत्यु भयो । कसैले पत्रपत्रिकाहरु सम्पादन गरे । यो परिवारको कुल सम्पत्ति एक अर्ब डलर भन्दा धेरै थियो ।
उनीहरुमा थिनाजीलाई सहयोग गरेको आरोप लगाइएको थियो । बेलायतको अब्जर्भर पत्रिकाको प्रयोग गरेर डेभिड एस्टरले मृत्युदण्डको सजाय उन्मुलन गर्न, अफ्रिकालाई बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त गर्ने जस्ता कानुन पास सहयोग पनि गरेका थिए ।
सन् २०१६ सम्ममा भारतको टाटा परिवारको बहुराष्ट्रिय समूहको मुल्य एक सय अर्ब डलर भन्दा धेरै रहेको छ र विश्वभरी नै साँढे छ लाखभन्दा धेरै कर्मचारीहरु कार्यरत रहेका छन् । समूहका अध्यक्ष रतन टाटा कम्पनीको डेढ सय वर्षको इतिहासमा टाटा समूह सम्हाल्ने छैंठौं टाटा परिवारका सदस्य हुन् ।
उनीहरु मुख्यगरी स्टिल निर्माणको लागि चिनिन्छन् तर आसामको चिया कम्पनीले उनीहरुलाई धेरै नै विवादमा तान्यो । लिक भएका केही टेप संवादले उनीहरुले चिया कम्पनीको विवाद आफ्नो पक्षमा पार्न आसाम राज्य सरकार विरुद्ध भारतको केन्द्रिय सरकारलाई प्रयोग गरेको कुरा खुलासा भएको थियो ।
यो कम्पनीलाई अमेरिकी ग्रान्ड जुरीले समेत एपिक सिस्टमबाट टेड्र सेक्रेट र डाटाहरु चोरेको आरोपमा १ अर्ब डलर जति जरिवाना लगाएको थियो ।
वाल्टन परिवारलाई विश्वकै लोभी परिवारको रुपमा चिनिन्छ । उनीहरुको नामले नै तपाईलाई यो कुराको संकेत दिन्छ कि उनीहरु विश्वकै समैभन्दा ठूलो रिटेलर वालमार्टको मालिक हुन् ।
करिव एक सय तिस अर्ब डलरका सम्पत्तिका मालिक उनीहरु कर छल्नको लागि धेरै नै चतुर मानिन्छन् । ब्लुमबर्गका अनुसार राजनीतिक पार्टीलाई सबैभन्दा धेरै चन्दा दिनेमा उनीहरु अगाडि आँउछन् जसको माध्यमबाट कर र श्रम नीति आफ्नो अनुकुल बनाउने प्रयास गर्छन् ।
सन् २०१४ मा लेबर बोर्डले वालमार्टले श्रम नीति उलंघन गरेको आरोप लगाएको थियो । सन् २००७ को आर्थिक मन्दीपछि अमेरिकीहरुले आफ्नो ४० प्रतिशत सम्पत्ति गुमाए तर यसै अवधीमा वालमार्टले भने ९६ प्रतिशत वृद्धि गर्यो ।
आज पनि रकफेलरहरु धेरै नै धनी रहेका छन् । ११ अर्ब डलर सहित फैलिएको यो परिवारमा १७४ जना सदस्य छन् । जेडी रकफेलरले तेल कम्पनी स्थापना गरे जुन सरकारको लागि ठूलो भयो र पछि सेभरोन, बिपि र एक्सोन मोविलमा विभाजित भयो ।
डेभिड रकफेलर मोर्गन चेसका पूर्व प्रमुख विल्डरवर्ग कन्फ्रेन्समा समेत रहेका थिए, पछि उनले फेडेरल रिजर्भको अध्यक्ष र टेजरीको सेक्रेटरीको जागिर समेत छोडिदिए । सन् १९७५ माउनको भेट मार्गरेट थ्याचरसँग भयो र उनको प्रेममा परे ।
उनले थ्याचरलाई राष्ट्रपतिहरुसँग, बैंकरहरुसँग र जासुसी प्रमुखहरुसँग भेट गराए त्यसको चार वर्ष पछि नै उनी बेलायतको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनिन् । पछि उनले रकफेलर कम्पनीलाई फाइदा हुने गरि विभिन्न नीतिहरु ल्याइन् ।
विन्सडर परिवार करिव १०० वर्षदेखि बेलायतको सिंहासनमा रहेको छ । सबै राजनीतिक निर्णयहरु राजसंस्थाको रबर छाप पछि नै कानुन बन्छ ।
राज परिवारको असली प्रभाव त झनै यो भन्दापनि धेरै कपटी रहेको छ । आफ्नो फाइदाको लागि राजपरिवारका सदस्यले विभिन्न लविङ गर्ने, दवाव दिने गर्छन् । उदाहरणको रुपमा प्रिन्स चाल्र्सले लेखेका चिठीहरु जसमा एनएचएसलाई होमियोप्याथी सेवा सुचारु गरिराख्न आग्रह गरिएको थियो र टोनी ब्लेयरले लागि सैनिक रणनीतिमा पाएको सल्लाहलाई लिन सकिन्छ ।
सामान्य रुपमा हामीले उनीहरुको भित्रि सम्झौताहरुको बारेमा थाहा पाँउदैनौं तर उनीहरुको शाही अर्काइभमा नियन्त्रण छ जहाँ महत्वपूर्ण जर्नल र चिठीहरु राखिएका छन् । जसले उनीहरुलाई षडयन्त्र गर्नको लागि अनुमति दिन्छ । के उनीहरुले नाजिसँग सहकार्य गरेकाथिए ? के उनीहरु डायनाको मृत्यको लागि जिम्मेवार थिए ? यी कुराहरु रहस्यमय छन् ।
रथचाइल्ड साम्राज्यको सुरुवात १८ औं शताब्दीमा जर्मनीमा भएको थियो जहाँ मायेर आम्सचेल रथचाइल्डले बैकंमा काम गरेका थिए । उनले आफुले कमाएको धनलाई अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा लगाए र आफ्ना पाँच छोराहरुलाई युरोपको मुख्य पाँच शहरमा स्थापित गराए ।
उनीहरुले व्यापारबाट धनमात्रै आर्जन गरेनन् शक्ति पनि आर्जन गरे । उनीहरुलाई युद्धमा दुवै पक्षलाई सहयोग गरेको आरोप लाग्यो र होलोकास्टलाई पनि आर्थिक सहयोग गरेका आरोप लाग्यो र विश्वभरिका केन्द्रिय बैंक पनि नियन्त्रण गरेको आरोप लाग्यो । उनीहरुको मुख्य उद्धेश्य नै विश्वमा एक मात्र तानाशाही सरकार बनाउने रहेको भन्ने गरिन्छ ।
प्रमुख बैंकहरु उनीहरुको स्वामित्वमा भएकाले विश्वको ८० प्रतिशत धन उनीहरुको नियन्त्रणमा भएको मानिन्छ तर, उनीहरुको कुल विश्वरको सम्पत्ति करिव २५० टिलियन डलर भएको बताइन्छ । उनीहरुको धेरै पारिवारिक सदस्य रहेका छन् र केन्द्रिय रथचाइल्ड समूहले ५७ मुख्य शहरहरुमा बैंक सञ्चालन गरेका छन् ।
सउल । दक्षिण कोरियाले देशव्यापीरुपमा कोरोनाविरुद्धको खोप शुरुआत गरेको छ । थेगु शहरको एक अस्पतालमा रहेका ६० वर्षीय जोडी चिकित्सकबाट खोप अभियान शुरु भएको बताइएको छ ।